WD250-8A+ Mashiinka Daabacaadda Sawirka Sawirka Dijitaalka ah ee Jiingadaha leh ee la cusboonaysiiyay ee ku habboon Dalabka Tirada Yar
WD250-8A+ Muti Pass scanning mishiinka daabacaadda khad dhijitaalka ah oo tayo sare leh, ballac daabacaadda max 2500mm, dherer aan xad lahayn, xawaaraha daabacaadda ilaa 520㎡/ h, waxtarka wax soo saarka agagaarka 120 ~ 450 PCS / H, xulashadaada ugu fiican ee amarrada yaryar iyo kuwa gaarka ah.
WDR200-XXX duuduuban hal baas oo warshadaha ah si loo duubo daabacaha hore ee dhijitaalka ah ee warqadda jiingadaha ah
WDKC310/380 MAshiinka jeexjeexa OATO ee loogu talagalay Kartoon
Quudinta tooska ah, Ururinta tooska ah, Si toos ah u hagaaji dhererka duub
Isku-darka daabacaha dhijitaalka ah si qumman.
Kartoonada baaxadda leh waxay isticmaali karaan mindiyo badan, qoto dheer oo aan xadidnayn
Waxaana la dalban karaa ballaca godka halka inta badan mishiinada warshadaha kale ay ku xaddidan yihiin 50cm
Masaafada ugu yar ee mindidu waa 50mm, dhererkeedu ma xaddidna
Ku hagaaji mindiyaha si caraf udgoon, saxnaanta booska gudaha 0.5mm.
Uruurinta boosaska, gooynta, xariiqda priloading dhammaan hal.
WDSF250 XAWAARAHA UGU SAREEYA EE AFKA AFKA EE BUUXA KAAROON
WDSF250/310 auto trimming slotting slitter system waa R&D u dhigma madbacadaha dhijitaalka ah ee Wonder, sidoo kale waa la isticmaali karaa kaligaa.
WDUV60-XXX daabacaha dhijitaalka ah ee saqafka sare ee hal baas oo leh khad UV muuqaal midab leh